नयाँ वर्षमा सुखमय दाम्पत्य जीवनका लागि अपनाउनुहाेस यस्ता उपाय — Imandarmedia.com
नयाँ वर्षमा सुखमय दाम्पत्य जीवनका लागि अपनाउनुहाेस यस्ता उपाय
काठमान्डाै । सम्बन्ध बनाउन जति सजिलो छ, त्यसलाई निर्वाह गर्न उत्तिकै गाह्रो हुन्छ । जीवनमा खुशीहरु राम्रो सम्बन्धबाटै अँउँछन् । भनिन्छ, जोडीहरु स्वर्गमै तय गरिएको हुन्छ । तपाईंको सम्बन्ध तपाईको व्यवहार, तपाईंको सुझबुझ तथा एक–अर्कालाई सम्झन सक्ने क्ष्ँमतामा निर्भर गर्दछ ।पुरै जिन्दगी बिताउने सक्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई खोज्नु आफेंमा एटा गाह्रो कार्य हो । हरेक सम्बन्धमा उतार–चढावहरु आइरहन्छन् । तर, त्यसको अर्थ के होइन भने तपाईंले ती सम्बन्धहरुलाई सिध्याउनु पर्छ । तीनलाई सुधार्ने प्रयास अवश्य पनि गर्नु पर्छ । जसबाट सम्बन्धलाई बचाउन सकिन्छ । आउनुहोस्, केही त्यस्ता उपायहरुका बारेमा जानौं, जसबाट सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
संग–संगै धेरै समय व्यतित गरौं आफ्नो जोडीसंग धेरैभन्दा धेरै समय बिताउनु पर्छ । यसो गर्नु भयो तपाईंहरुबीचको मनमुटाव हट्नेछ र तपाईंहरुले एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्ने मौका पनि पाउनु हुनेछ । बढी समय दिनाले तपाईंले आफ्ना जोडीको अझ बढी हेरचाह गर्न पाउनु हुनेछ, जसबाट तपाईंको सम्बन्ध मजबुत हुनेछ ।
तपाईंहरु दुई जना मात्र तास खेल्नुहोस्, बाहिर घुम्न जानु होस्, नयाँ–नयाँ कुराहरु गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, एक–अर्कँलाई सहयोग गर्नुहोस् । केही त्यस्तो काम गर्नुहोस्, जुन तपाईंहरु दुबै जनालाई मन परोस् र त्यसले तपाईंहरु दुबै जनालाई खुशी प्रदान दिओस् । साथै त्यस्ता कुराहरुलाई वेवास्ता गर्नु होस्, जसले तपाईंहरु दुबैको टेन्सन बढाउँछ ।
एक–अर्कालाई स्थान दिनु पर्छ – कहिलेकाहीं केही परिस्थितिहरु त्यस्तो भैदिन्छन्, जसमा केवल तपाईं आफैंलाई मात्र बुझ्न सक्नु हुन्छ । त्यो बेला एक्लै बस्न मन लाग्छ । त्यस्तो बेलामा तपाईंले आफ्ना जोडीलाई समय दिनु पर्छ । उनलाई आफ्नो जीवन जीउन दिनु पर्छ र तपाईंले पनि आफ्नो जिन्दगीलाई बुझ्नु पर्छ । यदि तपाईंहरुले एक–अर्काको जीवनमा तपाईंले बढी दख्खल दिन थाल्नु भयो भने त्यसले तपाईंलाई आफ्नै सम्बन्ध बोझ लाग्न थाल्नेछ ।
यदि तपाईंका जीवनसाथी साथीहरुसंग ह्याङ आउट गर्न चाहन्छन् भने उनलाई रोकटोक गर्नु हुँदैन । साथीहरुसंग समय बिताउन हामी सबैलाई रमाइलो लाग्छ । उनले तिमीलाई माया गर्छन्, तर त्यसको अर्थ के होइन भने उनका लागि साथीले महत्व नै राख्दैनन् । त्यसैले सम्बन्धमा स्थान दिनु पनि अति नै अनिवार्य छ ।
विश्वास गर्नु पर्छ -कुनै पनि सम्बन्धमा प्रेमको आवश्यकता जति हुन्छ, त्यति नै विश्वासको पनि हुनु पर्छ । यदि तपाईंको सम्बन्धमा शंका नामको चिज आउन थाल्यो भने त्यसले तपाईंको सम्बन्धलाई नराम्रो बनाउने निश्चित छ । खासगरी लामो–दुरीको सम्बन्धमा । एक–अर्कामा विश्वास हुनु अति नै अनिवार्य छ । अन्यथा तपार्ईहरुको सम्बन्ध निकै नै समस्यामा पर्नेछ ।
प्रेम यदि कम भयो भने पनि सम्बन्ध निर्वाह गर्न सकिन्छ, तर यदि विश्वास नै भएन भने सम्बनध टुट्नमा समय लाग्दैन । भनिन्छ, सम्बन्ध भनेको एउटा धागो जस्तो हो, यदि तपाईंले धेरै तान्नु भयो भने त्यसलाई टूट्नबाट कसैले पनि बचाउन सक्दैन । त्यसैले तपाईंले आफ्ना सम्बन्धमा सृदृढता चाहनु हुन्छ भने सम्बन्धका हल्का खुकुलो बनाउनै पर्छ ।
लगाव पनि हुनु पर्छ – तपाईंले आफ्नो साथीलाई कति चाहनु हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई कसरी थाहा हुन्छ ? तपाईले उनलाई माया गर्नु हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई पनि थाहा हुनु पर्छ । भनिन्छ, प्रेमको कुनै भाषा हुँदैन । तर, कहिलेकाहिं शब्दहरुमा यसलाई बयान गर्नु अति नै अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले यसमा आफ्नो लगाव बढाउनु पर्छ । यौन तथा लगाव दुई भिन्न कुराहरु हुन् । बेडरुमभन्दा बाहिर पनि तपाईंले आफ्ना जोडीलाई प्रेम व्यक्त गर्न अनिवार्य छ ।
एक–अर्काको कुरा सुन्नु पर्छ – कुनै पनि विषयमा वहस गर्नु भन्दा एक–अर्काको कुरा ध्यान दिएर सुन्न पर्छ र बुझ्नु पर्छ । वहस गर्नाले कुनै पनि कुराको हल निस्कँदैन । यसका साथै तपाईंले विना कारण झगडा गर्ने कुरा गरेर स्थितिलाई अझ बढी बिगार्नु हुनेछ । त्यसैले एक–अर्काको कुरालाई सम्झेर आफ्नो कुरा राख्नु पर्छ । यदि तपाईं सही हुनुहुन्छ भने तपाईंको साथीले पनि तपार्यंको कुरा बुझ्नेछन् । यसो गर्नाले तपाईंहरुको आपसी समझदारी राम्रो हुनेछ । केवल, उनलाई सम्झनका लागि थोरै समय दिनु आवश्यक छ ।
यदि तपाइले कोरोनालाई जित्नुभएको छ भने,यी कुरा र भुलेर पनि कहिले नगर्नुहोस यी गल्ति
बालबालिकाका लागि जरुरी केही कुराहरु
यि हुन् एक हप्तामा नै तौल घटाउने उपाय
महिलालाई स्वस्थ रहन डा. एलिसाको १० सुझाव
कस्तो अवस्थामा घरमा बस्ने, कस्तो अवस्थामा अस्पताल गइहाल्ने ?
ऐना हेरेर यसरी थाहाँ पाउनुहोस् आफ्नो भविष्य
यसरी थाहा पाउनुहोस थाइराइडको लक्षण
पैताला भतभती पोल्छ, सावधान ! यी रोगका लक्षण हुन सक्छ